Izixhobo kunye nabavelisi boomatshini abancedisayo | I-China eyongezwayo kunye noMatshini oNcedisayo woFektri kunye nabaxhasi
Lo mgca wokunkonkxa ubhiya usetyenziselwa ukuzalisa ibhiya ezinkonkxeni, ekuhlambeni, ekugcwaliseni nasekuseleni, ziiyunithi ezahluliweyo. Ingayigqiba yonke inkqubo efana nokuhlamba, ukugcwalisa nokutywina.
Iijenereyitha zomphunga zingumthombo ogqibeleleyo womgangatho ophezulu wokugcwalisa umphunga wee-micro-breweries, i-brewpubs kunye neenkqubo ezincinci zokupheka umphunga.
Inkqubo yokulungiswa kwemithombo ibandakanya oomatshini kunye nezinye izixhobo ezifunekayo ukulungiselela iinkozo ze-malt ngaphambi kokuqala kwemveliso ye-wort kwindawo yokugcina izinto.
Inkqubo ye-Hop Gun
“I-hop hop eyomileyo”, ekwabizwa ngokuba yi "cold-hopping" kwishishini, yinkqubo ekhutshwa ngayo i-oyile ezixabisekileyo kwilupulin equlethwe kwiihops kwibhiya. I-hopping eyomileyo yenziwa emva kwenkqubo yokusela kwindawo ebandayo. Okwangoku ngelixesha, ibhiya igqityiwe kodwa ayikakhuli ngokupheleleyo.